Fadeexad: $58 Milyan oo Dawlada Soomaaliya Soo Gashay Sanadkii 2011 oo Aan La Ogeyn Halka ay Martay | Anti-Tribalism
← Madaxweyne Ahmed Siilaanyo waxa uu doonayaa in uu Somaliya la hadlo, laakiin ma doonayo in uu la midoobo.
Kenya iyo Itoobiya oo Shirkii London kaddib Nairobi ku kala saxiixday heshiis ku saabsan waddo-tareen oo isku xiraysa Lamu iyo Addis Ababa →
Fadeexad: $58 Milyan oo Dawlada Soomaaliya Soo Gashay Sanadkii 2011 oo Aan La Ogeyn Halka ay Martay
Muqdisho (Moment Media Group) Warbixin tii ugu horeysay nooceeda oo ku saabsan dakhliga dawlada KMG ah ee Soomaaliya ayaa shaaca laga qaaday taasoo muujineysa in sanadkii tegey ee 2011 dawlada gacanta ku dhigtay lacag dhan $58 milyan (konton iyo siddeed milyan oo doolar) taasoo aan la ogeyn wadada ay martay.
Warbixintan oo aan weli rasmi ah loo bixin ayaa waxaa shaaca ka qaaday C/risaaq Fartaag oo u horey u ahaan jiray madaxa qeybta maamulka maaliyadda ee wasaaradda maaliyadda DKMG Soomaaliya. C/risaaq oo hadda ku sugan magaalada Nairobi ee wadanka Kenya ayaa qaar ka mid ah warbaahinta caalamka tusay dukumintiyo cadeynaya xisaabaadka dawlada soo galay.
Dakhliga dawlada iyo adeega bulshada
Sida ku cad waraaqaha uu soo bandhigay C/risaaq Fartaag oo rasmi ah ku saxiixan wasaaradda maaliyadda DKMG Soomaaliya xafiiskeeda Muqdisho, waxaa dukumintiyada ku cad lacag gaareysa $58 milyan oo ah dakhliga dawlada soo galay sanadkii tegey 2011. Lacagtaasi $2 milyan oo kaliya ayaa looga qoondeeyey adeega bulshada sida caafimaadka, gargaarka, waxbarashada iyo arimaha kale ee muhimka ee dadka Soomaaliyeed u baahan yihiin.
Sanadkii 2011 ee dhamaaday wuxuu ahaa xilligii abaaraha ugu daran ay dalka ku dhufteen mudo 60 sano ah, sida Qaramada Midoobay ay shaacisay bishii June 2011 iyadoo tobanaan kun oo barakacayaal gaajo iyo haraad la diifeysan ay soo buux dhaafiyeen degmooyinka caasimada. Waxaana dhaqaalahan uu u soo xerooday sidan:-
– $20 milyan (labaatan milyan oo doolar) waxaa dukumintiyada ay sheegayaan in laga heley canshuuraha gudaha ee dawladu ka qaado garoonka iyo dekeda Muqdisho.
– $3.7 milyan (Saddex milyaniyo toddobo boqol kun doolar) ayaa ah lacagdawladu ku qabatay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Aden Cabdulle ee magaalada Muqdisho taasoo madaxfurasho ahaan loo siin lahaa kooxo burcad badeed ah.
– $34 milyan (Soddon iyo afar milyan doolar) waxay dawladu ku heshay deeq ka timid wadamada caalamka. (Deeqdan waxaa ugu badan wadamada Carabta waxaana ku jira lacag ay soo dhiibtay Jaamacada Carabta oo dhan shan milyan oo doolar).
Dukumintiyada la faafiyey oo qaarkood ay heshay Wakaaladda Wararka Mareykanka ee Associated Press ayaa lagu muujiyey in lacagahan qaarkood la geeyey bangiga dhexe ee Muqdisho laakiin, C/risaaq Fartaag ayaa shaaca a qaaday inuusan jirin haba yaraatee wax cadeynaya in lacagaha la marsiiyey nidaamka saxda ah ee maaliyadda. Akhri warbixinta AP.
Waraaqaha maaliyadeed waxaa ku qoran in dawlada $2.6 milyan (labo milyan iyo lix boqol kun doolar) loo qoondeeyey adeegyada bulshada ee dadka Soomaaliyeed, taasoo ah arin fadeexad iyo waji gabax ku ah xukuumadda KMG Soomaaliya ee haatan xilka heysa. Illaa hadda wax cadeyn ah looma hayo qaabka lacagahan loo maareeyay.
Waxaa sidoo kale yaab noqotay in xilliga lacagtan ay soo gashay dawlada ay Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka ay gaajo ugu dhimanayeen dad lagu qiyaasay inta u dhexeysa 50,000 illaa 100,000 (sida Qaramada Midoobay sheegtay). Waxaase isweydiin mudan in xilligaasi dawlada Soomaaliya ay dibadda u qeylineysay halka hantida gudaha taalla aan haba yaraatee dadka dhimanaya waxba laga siin.
Wakaaladda AP ayaa sheegtay in ay xiriir la sameysay dawlada Soomaaliya masuuliyiinteeda laakiin ay ka gaabsadeen hal toddobaad oo ay ka warsugayeen inay ka jawaabaan fadeexadan.
Dhanka kale miisaaniyada 2011 oo nuqul ka mid ah ay heshay Shabakada ayaa cadeynaya in bishii January ee sanadkan 2012 ay ahayd bishii ugu badneyd ee dakhliga ugu badan uu soo galay garoonka diyaaradaha Muqdisho. Waxaa bishaasi oo kaliya dakhliga garoonka uu gaaray 1,554, 303taasoo ah kor u kac 82%, sida ku qoran xog ay Shabakada ka heshay mid ka mid ah dadka ku dhow wasaaradda maaliyadda oo aan rabin in la magacaabo.
Shabakadda ayaa sidoo kale ogaatay in hadda DKMG ah ay qaadato lacagta laga qaado diyaaradaha ku duula hawada Soomaaliya wixii ka hooseeya 25,000 feet (shan iyo labaatan kun oo cag), waxayna lacagtaasi ku dhacdaa xarun loogu magacdaray Mogadishu Main.
Wax badan kaman helin sida lacagtan loo maamulo iyo halka ay tagto.
Sida sarkaal ku dhow wasaaradda maaliyada uu sheegayo, caqabada ugu weyn ee ka jirta dhanka maaliyada ayaa ah saddex arimood oo waaweyn; –
i) Lacago horumarin ah (cash in advance) oo ay qaataan masuuliyiinta dawlada gaar ahaan madaxweynaha, raysul wasaaraha iyo afhayeenka baarlamaanka. Lacagahani waxaa badanaa loo qaataa safarada dibadda iyo kireynta diyaaradaha.
ii) Lacagaha ka baxa wasaaradda maaliyada iyo bangiga dhexe oo si waraaqo la’aan loo kala qaato (outside banging system) iyadoon jirin wax dukuminti ah.
iii) Arinta saddexaad ayaa ah xisaabiyaha guud ee dawlada oo aan haba yaraatee shaqeynin taasoo meesha ka saartay isxisaabin (transparency and accountability).
Maxaa dalka ka dhoofa?
Waxaa dalka soo gala badeecooyin fara badan oo ay ugu horeeyaan raashiinka, bagaashka, dharka iyo qaadka oo dibadaha ka yimaada, laakiin waxaa xusid mudan in dalka ay ka dhoofaan waxyaabo badan. Waxaana weydiinay saraakiisha wasaaradda maaliyada oo sidan noogu sheegay waxyaabaha dhoofa hadda;-
1- Sisinta (waa waxa ugu badan ee dhoofa)
2- Maqaarka [haraga]
3- Saliid macsaro
6- Meydi [beeyo]
8- Biraha iskaraabka (waxay hadda ka dhoofaan dekeda Muqdisho)
Shaqaalaha garoonka iyo SKA
Sidoo kale Shabakadda oo u kuurgashay shirkadda SKA ee maamusha garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa heshay in shirkadda ay tahay mida bixisa lacagta ugu badan ee la siiyo shaqaale guud ahaan Muqdisho. Laakiin nasiib daro lacagtaasi waxaa hela shaqaalaha ajnabiga oo kaliya.
Shaqaalaha Soomaalida ee la shaqeeya shirkadda SKA waxay mushahar u qaataan $200 (labo boqol doolar oo u dhiganta shan milyanoo Shilin Soomaali ah) halka shaqaalaha ajnabiga ee xitaa aan ahayn xirfadlayaasha ay helaan $2,500 (labo kun iyo shan boqol doolar).
Mid ka mid ah saraakiisha SKA oo aan rabin in magaciisa loo qaato warbixintan ayaa Shabakadda u sheegay in dawlada Soomaaliya ay bixisay amarkaasi ka dib markii dawladu sheegtay in haddii lacag fara badan la siiyo shaqaalaha Soomaalida ay taasi keeni karto in dawladu weyso shaqaale xirfad leh oo ka shaqeeya wasaaradaha dawlada, si taasi aysan u dhicina la yareeyo mushaharka shaqaalaha Soomaalida ee u shaqeeya shirkadaha ajnabiga ee dalka jooga.
Shirkadda SKA iyo dawlada Turkiga ayaa hadda si kala gaar ah u wada mashaariic lagu ballaarinayo garoonka qeybihiisa kala duwan.
Dhanka kale waxaa 6-da bishan Maarso markii ugu horeysay garoonka Muqdisho ka duuli doona duulimaadkii ugu horeeyey ee shirkadda Turkish Airlines oo toos isugu xiri doonta Muqdisho iyo Istanbul, sida ay shaacisay toddobaadkii hore safaaradda Turkiga ee Muqdisho.
Waxaa la filayaa in lacag dheeri ah ka soo xaroon doonto duulimaadyada Turkish Airlines.